Trump သည် Veto Coronavirus Aid Package ကိုခြိမ်းခြောက်နေသည် - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020 ဒီဇင်ဘာလတွင် 23, 2020 ဗင်းဆင့်ဖာဒီနန် ဒီမိုကရက်ပါတီ, Donald Trump, အသားပေးသတင်းများ, သတင်းဆောင်းပါး, နိုင်ငံရေး, ရီပတ်ဘလီကန်
သမ္မတ Trump သည်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ကိုလူတစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အထိတိုက်ရိုက်အကူအညီတိုးမြှင့်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်။
သမ္မတ Trump ၏ဗွီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျသည်ကွန်ဂရက်အတွက်သာမကအိမ်ဖြူတော်မှလူများအားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။
အမေရိကန်များကိုစစ်ဆေးမှုများတိုးမြှင့်ရန် Trump ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုဒီမိုကရက်များကကောင်းစွာလက်ခံခဲ့သည်။
Twitter ဒီဇင်ဘာ ၂၂ တွင်တင်ထားသောဗွီဒီယိုတစ်ခုတွင်အမေရိကန်သမ္မတ Trump ကအမေရိကန်များအနေဖြင့် COVID-19 အထောက်အပံ့များပိုမိုလိုအပ်သည်။
သမ္မတ Trump သည်လူကြီးများနှင့်ကလေးများအတွက်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ကိုလူတစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ အထိတိုက်ရိုက်အကူအညီတိုးမြှင့်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်။ သူကသူ့ကိုယ်ပိုင်ဘဏ္asာရေးဝန်ကြီးစတီဗင် Mnuchin ကအဆိုပြုထားသည့်ဒေါ်လာ ၆၀၀ ချက်လက်မှတ်ကို“ ရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်သေးငယ်သည်” ဟုဖော်ပြခဲ့သည်
"ငါဒီဥပဒေကြမ်းကိုပြင်ဆင်ရန်ကွန်ဂရက်ကိုတောင်းဆိုနေပါတယ် စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ရယ်စရာနိမ့် $ 600 မှ $ 2,000 သို့မဟုတ် $ 4,000 တိုးမြှင့်။
“ ကွန်ဂရက်ကိုဒီဥပဒေကနေဖြုန်းတီးနေတဲ့မလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်ဖို့နဲ့သင့်တော်တဲ့ဥပဒေကြမ်းပေးပို့ခိုင်းပါ့မယ်။ နောက်လာမယ့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က Covid ကယ်ဆယ်ရေးအထုပ်ကိုပို့ပေးရပါလိမ့်မယ်။ ”
တွစ်တာဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့်“ ဖြုန်းတီးသော” ပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်နေသောထိုအထုပ်သည်“ တကယ်အရှက်ကွဲခြင်း” ဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည် "ဒါဟာ Covid ကယ်ဆယ်ရေးဥပဒေကြမ်းလို့ခေါ်တယ်၊ ဒါပေမယ့် Covid နဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး" တစ် ဦး တုန်နိုင်ငံတော်သမ္မတ Trump ကဆိုသည်.
တူညီသောအသက်ရှူ၌, သမ္မတ Trump ဥပဒေကြမ်းကနေစွပ်စွဲဖြုန်းတီးခြင်းနှင့်မလိုအပ်သောပစ္စည်းများဖယ်ရှားပစ်ရန်ကွန်ဂရက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်သမ္မတကသက်သေအထောက်အထားများအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအထောက်အပံ့၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ထောက်ပံ့ငွေများ၊ ငါးဖမ်းခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရအကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်တွင်မပါဝင်ပါ။ ယင်းအစား၎င်းတို့သည်ဒေါ်လာ ၁.၅ ထရီလီယံနီးပါးပါသည့်တစ်ချိန်တည်းတွင်အတည်ပြုခဲ့သောဘတ်ဂျက်ဥပဒေကြမ်းမှဖြစ်သည်။
သမ္မတ Trump ၏ဗွီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျသည်ကွန်ဂရက်အတွက်သာမကအိမ်ဖြူတော်မှလူများအားအံ့အားသင့်စေခဲ့သည်။ သူသည် Coronavirus အထောက်အပံ့နှင့်ဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရက်အတန်ကြာမှတ်ချက်မပေးခဲ့ဘဲသူ၏အတည်ပြုချက်ကိုလည်းအချို့ဟုမှတ်ယူခဲ့သည်။ သမ္မတ Trump ၏ဥပဒေပုံစံကိုလက်မှတ်ထိုးရန်ငြင်းဆန်ခြင်းသည်ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့တွင်အစိုးရပိတ်သိမ်းခြင်းကဲ့သို့သောအကျိုးဆက်များကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်တွင်အိမ်ဖြူတော်၌သမ္မတ Donald Trump ။
အနည်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာတောင်းဆိုထားသည့်တိုက်ရိုက်အကူအညီတိုးမြှင့်ခြင်းကိုဒီမိုကရက်များကကောင်းစွာလက်ခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကancy္ဌ Nancy Pelosi (D-CA) သည်တွစ်တာတွင်သူမ၏ပါတီဝင်များအနေဖြင့်သူမ၏အာမခံချက်ကိုပေးခဲ့သည် စိတ်အားထက်သန်လိမ့်မယ် တိုက်ရိုက်အကူအညီတစ်ခုတိုးလာအတည်ပြု.
ဆီးနိတ်လူနည်းစုခေါင်းဆောင် Chuck Schumer (D-NY) အလားတူကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဤအမှု၌, သမ္မတ Trump ရဲ့ဗီဒီယိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုသူ့ကိုယ်ပိုင်ရီပတ်ဘလီကန်ပါတီမိတ်ဆွေများ၏လေးကိုဖြတ်ပြီးအားလုံးရိုက်ချက်အထက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီနှစ်ခုစလုံးသည်ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်နှစ်ခုလုံးတွင်အတူတကွစုရုံးကြပြီးရှုပ်ထွေးသော coronavirus အကူအညီနှင့်ဘတ်ဂျက်ဥပဒေကြမ်းကိုတနင်္လာနေ့တွင်အတည်ပြုခဲ့သည်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်လက်ခံခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ ၅၀၀၀ ပါဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်ကိုလပေါင်းများစွာခက်ခဲသောစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ခရစ္စမတ်မတိုင်မီအရေးတကြီးလိုအပ်နေသော Coronavirus အထောက်အပံ့သည်ညှိနှိုင်းညှိနှိုင်းသည့်သင်္ကေတအဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ သမ္မတ Trump မကြာသေးမီကလူသိရှင်ကြားညှိနှိုင်းမှုအပေါ်မှတ်ချက်ပေးခဲ့သည်။ သူကသူပြောဆိုသောရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုကိုသက်သေပြရန်လုံးဝအာရုံစိုက်ပုံရသည်။
Chuck Schumer အများပိုင်သတင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ဒီမိုကရက် Donald Trump Nancy Pelosi